Gqibezela ™: Urhwebo lweBorder-Border ukusuka kuNguqulo, ekuthengeni, ngokuzalisekiswa | Martech Zone
Gqibezela ™: Urhwebo lweBorder-Border ukusuka kuNguqulo, ekuthengeni, ngokuzaliseka
NgoLwesibini, Juni 13, 2017 NgeCawa, uDisemba 24, 2017 Douglas Karr
KaTony Bianco Uyilo luye lwafunwa kakhulu e-Australia ngaphezulu kweminyaka engamashumi amane, kwaye ngoku uphawu luye lwangena kwiimagazini eziphambili zefashoni kunye noluhlu olunxibe kakuhle kwiimodeli zase-Australia. Namhlanje, uninzi lwabantu abadumileyo kunye neemodeli e-US nakwiYurophu iphela zinokubonwa zinxibe iintlobo zezicathulo zikaTony Bianco kunye nezixhobo.
Ukunceda ukukhawulezisa ulwandiso lwabo lwamazwe aphesheya kunye nemfuno yokuwela umda, uTony Bianco usebenza noPitney Bowes ukubonelela ngogcino, amava asekhaya e-intanethi kubathengi kwihlabathi liphela nge I-Pitney Bowes Gqibezela isisombululo se-Cross-Border.
Ngoku uTony Bianco unokufikelela kubathandi bezihlangu kwihlabathi liphela kwaye abavumele ukuba babhatale ngemali yasekuhlaleni ngeendleko ezihlawulelwe ngokupheleleyo eziqinisekisiweyo-ke akukho nto yothusayo xa kuziswa. Abathengi behlabathi bafumana izihlangu ezibanceda babonakale kwaye uphawu oluhle lukaTony Bianco laziwa ngcono kwihlabathi liphela.
Unyawo lwehlabathi lubalulekile kuthi. Sineemfuno kwihlabathi liphela kwaye sifuna ukufumana izihlangu zethu kunye nezinto ezincedisayo kwiqela leentengiso ezahlukeneyo. Ngokusebenzisana nePitney Bowes, singathengisa kubathengi kumazwe angaphezu kwe-150 kunye nemimandla kunye netekhnoloji yabo yokuphela inikezela ngamava angenamthungo kubathengi bethu. UAdam Bianco, uMlawuli, uTony Bianco
Izisombululo ezinqamlezileyo zomda kaPitney Bowes ziyafumaneka njengenxalenye ye I-Pitney Bowes Commerce Cloud, umboneleli wezorhwebo, onika ukufikelela kwizisombululo, kubahlalutyi kunye nee-API kulo lonke uqhubekeko lwezorhwebo olupheleleyo ngesantya kunye nobuchule.
Gqibezela amandla e-Cross-Border kubandakanya
Izixhobo Zokuvelisa Iimfuno - I-Pitney Bows inokubonelela ngayo yonke into ukusuka kuphando lwabathengi ukuya kwimikhankaso yentengiso yangaphakathi, ivumela ishishini lakho ukuba lingene kwindawo yabo yokugcina yolwazi yabathengi abanqamlezayo kwaye bathathe inxaxheba kwiinkqubo zabo zentengiso ezisebenzisa iindlela zelizwe ezinje ngezentlalo, ukukhangela kunye nentsebenziswano ukuqhuba ukuthengisa okunyukayo kunye Ukuvezwa kwegama.
Indawo yeWebhusayithi - Itekhnoloji yobunini beCross-Border yendawo yakho yasekhaya kumazwe angama-220 ukulungiselela ukuguqulwa kwabathengi. Inguqulelo, imali kunye nokunyuselwa okuthe ngqo kwilizwe kunye namaxabiso emveliso afakiwe. Akukho sidingo sokufumana iindleko ezongezelelekileyo zokwakha kunye nokugcina iisayithi zelizwe okanye ukutyala imali kwizibonelelo zolawulo lwempahla.
Iindleko eziMiselweyo kunye nokuThobela - Ngokukhetha i-Pitney Bowes ' Umsebenzi ohlawulelweyo (DDP) ukhetho, uya kubonelela ngocaciso lweendleko kubathengi bakho ngokubonisa imisebenzi eqinisekisiweyo kunye neerhafu ngaphambi kokuphuma ngaphandle kokumangaliswa kwe-COD xa uhambisa. Amanqanaba ePitney Bowes kwaye abale ikhathalogu yemveliso, ethintela apho kufanelekileyo, ngelixa uphatha yonke imisebenzi enxulumene nokuthobela.
Iintlawulo nomngcipheko - I-Pitney Bowes ibonelela ngokukhethwa kweendlela zentengiso zehlabathi kunye nakwiimarike, kwaye usebenze njengomthumeli werekhodi kunye neqela eliphambili elinomdla. Kwaye njengoko Umrhwebi weRekhodi (MOR) baphatha yonke inkqubo yokuhlawula kunye nolawulo lobuqhetseba, befaka abathengi babo kumatyala amabi kunye nokubuyisa.
Ulawulo lwamalungiselelo - Emva kokuba iipasile zakho zilungiselelwe ukusiwa kwilizwe liphela kwenye yeebubhu zangaphakathi zokuqhutywa kwePitney Bowes, zinikezelwa kubaphathi bezona zikumgangatho ophakathi kuthungelwano lwehlabathi. Banceda ukuphelisa inkxalabo yabathengi malunga nobunzima kunye neendleko ezinxulumene nembuyekezo ngokulawula nangokuqinisekisa iimpahla ezibuyisiweyo kwiindawo eziphambili zokuhambisa kwihlabathi liphela. Banikezela ngokhuseleko lweepasile kwaye babonelele ngezixhobo zokulandela umkhondo kwephakheji ngokulula.
Ukhathalelo lwabathengi - Xhobisa abameli beenkonzo zakho ukubonelela ngezona nqanaba liphezulu lenkxaso ngesixhobo sePitney Bowes 'Consulate, isixhobo esomeleleyo, esisekwe kwinkonzo yabathengi ukuphendula imibuzo enxulumene nokulandelelana kunye nokulandela umkhondo kubathengi bakho bamanye amazwe. Amaziko abo eminxeba angama-24/7 agubungela iilwimi ezili-15 ezikhoyo ukunceda imiba enzima ngakumbi xa ivela.
Inkxaso Eqhubekayo - Iqela likaPitney Bowes elizinikeleyo lokuzibandakanya kwabathengi lilungele ukubonelela ngenkxaso oyifunayo kwintsebenzo yeshishini, ukunika ingxelo, ukuphuculwa kophuhliso, kunye nohlalutyo, imibuzo yabathengi, ukubuyisa ulawulo kunye nokunye. Ngoluhlu lwabathengi olukhulayo lwabathengisi abangaphezu kwama-300, uPitney Bowes unamava kunye nobungcali obudingayo ukuze uhambe ngempumelelo kwihlabathi liphela.
tags: Ilifu lezoRhweboGqibezelaUmda wokuwelaukuveliswa kwebangourhwebo lwehlabathiiqonga lezorhwebo lehlabathiInkonzo yabathengi behlabathiezorhwebo jikeleleukuzaliseka kwehlabathiulungiselelo lwehlabathiiintlawulo zehlabathiInkxaso yehlabathiuguqulelo lwehlabathiurhwebo lwamazwe ngamazweukuzaliseka kwamazwe aphesheyaizinto zelizwe jikeleleiintlawulo zamanye amazweukuthengisa kumazwe aphesheyakumazwe ngamazwekwasekhayalawulo lwezinto zokusebenzaI-Pitney BowesTony Biancoulwenziwo lwewebhusayithi